Ukuhlaziywa kweMvelaphi kwiMfundo yabaMnyama - Wordfest South Africa
Ngoku guqulwa kwegama la kutshanje lakwaGrahamstown eMakhanda, elitshintsha indlela esiyikhumbula ngayo imbali, ngaba asiyixesha lokutshintsha indlela esiyifunayo? “Le nkqubo yezemfundo ngokucacileyo ayisebenzi,” kusho uNthebe Molope ekuqalisweni kwencwadi yakhe ebizwa ngokuba Evolutionary Review on Black Education: A Travel Through Time and into our Future…Hope in Hand.
Sonke siyazi malunga neengxaki kwinkqubo yethu yemfundo: iincwadi ezingenakwenziwa ngexesha okanye zonke ezo zinto, amaziko okufundela aphezulu, ootitshala abangabonakali emsebenzini, ootitshala abangaxhotywanga ukufundisa … kodwa nini kwaye njani olu tshintsho?
UMlope waqalisa le projekthi kwiminyaka emithandathu edlulileyo kwaye uthi ukholelwa ukuba kuyimfuneko ukubeka ipeni kwiphepha malunga nale micimbi. Uphando lwakhe lujonge kwixesha elinesithathu ezahlukeneyo njengoko esithatha eluhambweni ekuhloliseni imfundo ye-pre-colonial kunye nolwazi, abathunywa bevangeli kunye nemfundo yobandlululo kunye nemfundo namhlanje. “Esinye sezizathu endizibhale le ncwadi kukuqala ingxoxo malunga nenkqubo yethu yemfundo. Sisebenzisa i-4% ye-gdp kwizibonelelo zentlalo. Amazwe amaninzi aphumeleleyo achitha i-4% kwimfundo apho sichitha 6% kwimfundo kwaye benza
Ngo-1994 xa uNelson Mandela ekhankanya amavoti eRwanda wayefumana uhlanga. Kwiminyaka engama-25 kamva baye bahlakulela ngakumbi kwimfundo kunokuba sinakho. I-Rwanda yilizwe lokuqala ukuhambisa igazi usebenzisa i-drone.
“Namhlanje sinomyinge ophakathi komyinge omnye kwabafundi abangama-39 eklasini. Akunjalo ngaso sonke isikhathi kwaye ukuba ucinga ukuba unethamsanqa, “utsho njengoko echaza ukuba amanqanaba amaninzi anamaqela angama-85 kwindawo engavumelekanga loo mandla abantu. “I-Botswana inomlinganiselo we-1: 2,” uyongezelela.
Namhlanje abafundi abaninzi bafundiswa ngemfazwe yehlabathi enye kunye ezimbini kodwa ngaba bangaphi abafundi ababaziyo xa uShaka Zulu wazalelwa okanye ngubani yena? UMoper ukhankanya le micimbi njengoko athi: “ukuba ufuna ulwazi malunga noCecil John Rhodes, uya kufumana isiqingatha selayibrari ngolwazi. Ukuba ufuna ulwazi ngoShaka Zulu onokufumana isishwankathelo esifutshane kwaye igama lakhe lidla ngokungafihli.”
“Wonke umphathiswa wemfundo uza necebo elihlukileyo, ngoko akukho ukuqhubeka kunye nokuvumelana. Ngamanye amaxesha sicinga ukuba izixhobo ziya kusombulula zonke iingxaki zethu. Siphosa imali kwiingxaki kwaye sicinga ukuba kuya kulungisa izinto. Imali yodwa ayiyi kulungisa nantoni na. Ngokuphathelele ukubeka izixhobo ezintle kakhulu apho zifuneka khona, utsho uMlope. Kufuneka kubekho into engalunganga ngayo kwinkqubo yethu yemfundo eMzantsi Afrika ukuba sineenkqubela ezintathu zekharityhulam kwiminyaka eyi-25 edluleyo, “utsho njengoko ekhuluma ngemfundo namhlanje. “Njalo xa sinomfundisi omtsha wezemfundo sinecebo elitsha lokuphucula inkqubo yemfundo,” Uyachaza kwakhona ukuba akukho ukulungelelaniswa nesenzoKukho ukukhanya ekupheleni kwetoni. Kukho iiprojekthi ezinkulu kwiKwazulu-Natali naseGauteng kodwa sinezingane ezinomileyo kwiimitha zokugcina. Ndicinga ukuba sinenkinga enkulu enzulu kwimfundo yethu.”
“Le ncwadi inokuthetha malunga nokuba sasiphi na, kwenzeka ntoni na apho sikhona ngoku. Imbono yam kukuba siye sigxininiswa endaweni yokuqhubela phambili.”
Kukho ukuqonda okuqhelekileyo phakathi kwabantu ukuba imbali ibhaliwe ngumnqobi. Ingaba lixesha lokuphinda ubhale imbali kwaye ukhumbule elidlulileyo indlela ekufuneka ikhunjulwe ngayo? Le ncwadi ihlolisisa loo nto. “Kuya kuba ngabanye abantu babhala imbali yethu kwaye nje nje sivumela ukuba kuqhubeke …” utsho uMlope
“Kukho ukukhanya ekupheleni kwetoni. Kukho iiprojekthi ezinkulu kwiKwazulu-Natali naseGauteng kodwa sinezingane ezinomileyo kwiimitha zokugcina. Ndicinga ukuba sinenkinga enkulu enzulu kwimfundo yethu. “
“Le ncwadi inokuthetha malunga nokuba sasiphi na, kwenzeka ntoni na apho sikhona ngoku. Imbono yam kukuba siye sigxininiswa endaweni yokuqhubela phambili. “
Kukho ukuqonda okuqhelekileyo phakathi kwabantu ukuba imbali ibhaliwe ngumnqobi. Ingaba lixesha lokuphinda ubhale imbali kwaye ukhumbule elidlulileyo indlela ekufuneka ikhunjulwe ngayo? Le ncwadi ihlolisisa loo nto. “Kuya kuba ngabanye abantu babhala imbali yethu kwaye nje nje sivumela ukuba kuqhubeke …” utsho uMlope.
Tags: an evolutionary review on black education isixhosa nthebe molope
Previous Triangulum: re-imagining South Africa’s future through fiction
Next Re-thinking (black) education: Exploring the South African education system through time